Wararkii u dambeeyay Ammaanka Dhuusamareeb oo la adkeeyay iyo qaban qaabada doorashada… | Jowhar Somali news Leader
Home News Wararkii u dambeeyay Ammaanka Dhuusamareeb oo la adkeeyay iyo qaban qaabada doorashada…
Wararkii u dambeeyay Ammaanka Dhuusamareeb oo la adkeeyay iyo qaban qaabada doorashada…
Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo ay socoto qaban qaabada doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug oo la filayo inay berri ka dhacdo magaalada.
Kulamo kala duwan oo looga hadlayay amniga magaalada iyo diyaar garowga doorashada berri oo Axad ah dhici doonta ayaa ka dhacay Dhuusamareeb, waxaana laamaha amniga la faray inay adkeeyaan amniga magaalada.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada amniga lagu kordhiyay qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada iyo waddooyinka muhiimka ah, iyadoo waddo kasta lagu hubinayo dadka iyo gaadiidka.
Wariye ku sugan Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in xubnaha dowladda Federaalka u wakiilatay howsha doorashada Galmudug ay ka go’an tahay in la qabto doorashada berri oo aanay mar kale wax dib ah ku imaan.
Hannaanka ay taageereyso dowladda Federaalka ee doorashada Galmudug ayaa horay khilaaf uga dhashay, iyadoo Musharaxiintii Mucaaradka ay qaadaceen doorashada, isla markaana diiday inay is diiwaan geliyeen, kaddib markii ay ku eedeeyeen dowladda Federaalka inay afduubtay howshii doorashada.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan Sheekh Maxamed Shaakir oo garabka Ahlusuna u doorteen Madaxweynaha Galmudug, Kuxigeenkiisa iyo Baarlamaanka Ahlusuna.
Doorashada berri haddii ay dhacdo oo la doorto Madaxweyne iyo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug waxay ka dhigan tahay garabkii 3aad oo Galmudug ay yeelato.